Codex က Panasonic VariCam 35 ကင်မရာအတွက် V-RAW Recorder ကိုတင်ပို့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Panasonic က VariCam 35 ကင်မရာ Codex သင်္ဘောများ V-RAW Recorder
Panasonic က VariCam 35 ကင်မရာ Codex သင်္ဘောများ V-RAW Recorder
နောက်ဆုံးရထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အ Codex အစဉ်အလာကိုဆက်လက်
Codex (www.codexdigital.com) ယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်ဖို့ Panasonic က VariCam 35 ကင်မရာကို Codex V-RAW Recorder ကိုပို့ဆောင်နေပါတယ်။ ငြိမ်ဝပ်-of အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ high-performance ကိုပေါင်းစပ်ပြီး, ကို Codex V-RAW Recorder 4fps အထိမှာ 120K RAW ၏အသံဖမ်းဖွင့်ခြင်းဖြင့် Panasonic ကရဲ့ကင်မရာအသစ်ပလက်ဖောင်းရန်အရေးကြီးပါသည် compressed လုပ်မထားတဲ့ RAW ဖမ်းယူဖြည့်စွက်ခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်မှတ်တမ်းတင်ဆောင်ခဲ့၏ Codex ရဲ့အစဉ်အလာကိုဆက်လက်နှင့် အောင်မြင်စွာစျေးကွက်မှလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များကို။
အဆိုပါ Codex V-RAW Recorder မှတ်တမ်းများကိုနောက်မျိုးဆက် Codex မှ 2.0Gb / s တစ် bandwidth ကိုရှိပြီး High-end ဖမ်းဘို့ဘားထမြောက်တော်မူသော Drive ကို 20, Capture ။ အဆိုပါ V-RAW Recorder ၏ပေါင်းစပ်နှင့် Capture အ Drive ကို 2.0 အလွယ်တကူ Panasonic က VariCam4ထံမှ 120fps အထိမှာ compressed လုပ်မထားတဲ့ 35K RAW မှတ်တမ်းတင်ဘို့လိုအပ်သော Bandwidth ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းဘို့, V-RAW Recorder ကြိုးတွေဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးရိုးအောင်, အ VariCam 35 ကင်မရာတိုက်ရိုက်-attach module တစ်ခုအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ V-RAW Recorder အင်အားကြီးကိုလည်းကင်မရာအထုပ်မှကင်မရာကို ပို. ပင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သုံး 24V ဆက်စပ်ပစ္စည်းပါဝါလက်ငင်းရှိပါတယ်။
အတွက် Clairmont ကင်မရာမှာ, မိုက်ကယ်အပြစ်လွှတ်, SoC ဆိုပါတယ် VP ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုင်း "ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ Codex မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာနည်းပညာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထောက်ခံမှုများကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အကြီး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များ" Los Angeles မြို့။ "ကျနော်တို့ငှားရမ်းဖောက်သည်များ၏လက်သို့အသစ်က Codex V-RAW စံချိန်ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနှင့် Panasonic RAW Workflows ဘို့မိမိတို့နည်းပညာမိတ်ဖက်အဖြစ် Codex ကို ရွေးချယ်. ကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြသည်။ "
အဆိုပါ VariCam 35 များအတွက် Codex V-RAW Recorder Codex Vault ပလက်ဖောင်း, Vault ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကနေတဆင့်, Codex ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပဲအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံဖမ်းနှင့်မီဒီယာမဟုတ်များကိုအစဉ်အလာ, ဒါပေမယ့်လည်း post မှထုတ်လုပ်မှုကနေအပြည့်အဝ-featured,်workflow နှင့် archive ကိုဆက်လက် , ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတိုက်ရိုက်နှင့်မီဒီယာ Vault စနစ်များကို။ ထိုကဲ့သို့သောအတ္တလန်တာအခြေစိုက်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်အငှားအိမ်သူအိမ်သားပိုင်ရှင်ဂျွန် Sharaf အဖြစ်တည်ဆဲ Vault ဖောက်သည်သည်, VariCam 35 ၏ဒေတာလိုအပ်ချက်များကိုရှိနေသော်လည်း Codex ထုတ်ကုန်ပိုမြန် throughput ၏ယနေ့ဖွင့်စိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကြောင်းတန်ဖိုးထားတယ်။ Clairmont ကင်မရာနှင့်အတူ Sharaf အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပထမဦးဆုံး V-RAW Recorder ပိုင်ရှင်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
"တစ်ဦး Codex Vault ပိုင်ရှင်အဖြစ်, ငါပြီးသား Codex ထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်လည်းဖြစ်၏," Sharaf ကဆိုသည်။ "Panasonic ကအဆိုပါ Varicam 35 များအတွက် RAW မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့မိတ်ဖက်ရွေးယူဘူးပါဘူး။ Codex ၏ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအားဖြင့်၎င်း, ကျောထောက်နောက်ခံပြု-Up-အစွန်းဖြတ်တောက်နေကြတယ်။ "
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဝယ်ယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက် (Codex ထံမှရရှိနိုင်ပါwww.codexdigital.com).
Codex က high-performance ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools တွေကိုလွတ်လပ်သောအားဖြင့်အလုပ်နှင့် ဟောလိဝုဒ် ရွေ့လျားမှုပုံများ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရိုက်ကူး High-end TV နဲ့စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့ဒီဇိုင်း, ကုမ္ပဏီ၏နာမည်ကျော်ထုတ်ကုန်အစုစုလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု post မှကင်မရာကိုကနေတဆင့်ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေနဲ့ပုံရိပ်တွေ၏အပြောင်းအရွှေ့ချောမွေ့ကြောင်းမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များလည်းပါဝင်သည်။ သူတို့ကအစအရောင်နေ့စဉ်သတင်းစာများဖန်ဆင်းခြင်း, သိမ်းဆည်း, ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဦးဆောင်-အစွန်း tools များပါဝင်သည်။ Codex အတွက်ရုံးများနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်-ကျင်းပကုမ္ပဏီ, ဗြိတိန်, ဖြစ်ပါတယ် Los Angeles မြို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ပဲရစ်, ဘေဂျင်းနဲ့ Wellington, ပေါင်းရောင်းအားမိတ်ဖက်။ Codex သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက် trailblazing toolsets နှင့်စွမ်းရည်များနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ပြီး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်ဍာအဘို့ဘားမြှင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ .
4K Codex Codex ဒစ်ဂျစ်တယ် Panasonic က Panasonic က VariCam post ကိုထုတ်လုပ်မှု V-RAW V-RAW Recorder Varicam Varicam 35 VRAW 2015-06-30
ယခင်: အသံဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်အခုတော့သင်္ဘော
နောက်တစ်ခု: vuMedia ™ထိပ်တန်းကျော် CloudsTV အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Go ကိုကူညီပေး